Nhau - Nechaenderera mberi kuvandudzwa kweCCC tekinoroji, China's CNC michini indasitiri yakapinda zvishoma nezvishoma shanduko
Nekusiyana kwezvinodiwa mumusika uye nekuenderera mberi kwehunyanzvi hweCNC tekinoroji, China yemuchina indasitiri yemuchina yakapinda zvishoma nezvishoma nguva yekuchinja-mazano, shanduko mumusika wekutenga uye wekuda, chigadzirwa kumhanyisa mhanyisa uye zvimwe zvinhu zvava kuda kuunza. shanduko inoshamisa. Zviratidzo zveizvi zvese zvinoratidza kuti kutenderera kutsva kwekuuya kuri kuuya.
Sezvo isu tese tichiziva, Guangdong parizvino ndeimwe yeakakura CNC michina yekugadzira zvigadziko munyika uye kunyangwe pasirese. Mhando idzi dzinosanganisira CNC michina yemoto, CNC yekurova michina, CNC waya yekucheka michina, nzvimbo dzekumachina uye zvimwe zvigadzirwa. Zvisinei, nekuda kwezvipingamupinyi zvakadzika zvekupinda muindasitiri, pane huwandu hwakawanda hwevagadziri vadiki mawekishopu madiki akasanganiswa. Kuti vakwikwidze pamusika, vazhinji veGuangdong CNC vagadziri vemuchina vari kutaurirana zvakanyanya, asi ivo vari kufuratira huwandu huri kuwedzera hwevagadziri vemuchina weCCC mune mamwe matunhu. Parizvino, iyo mukana wekuverenga weCCC vagadziri vemuchina kuGuangdong iri pachena. Jinan muShandong, Anhui muNanjing, uye Beijing muHebei Kuonekwa kwenhamba kudzora michina vagadziri mudunhu kwakabata Guangdong's yekuverenga kudzora michina vagadziri nekushamisika. Uye sezvo nyika dzakabudirira muEurope neAmerica dzichidzokera mukugadzira, huwandu hukuru hwevanokwikwidza vagadziri vachabuda.
Mazano ekuvandudza uye zvigadzirwa zvekumhanyisa mhanyisa isimba rakakosha rekambani kukura kwenguva refu. Nekudaro, izvi zvinoda yakasimba technical technical uye rutsigiro rwemari. Iyo CNC michini indasitiri ine nhoroondo yemakumi akati wandei emakore kubva mukubuda kwayo kusvika mukukura. Ikozvino musika uye vatengi 'Performance kurongeka uye kuvimbika kwemhando vane zvakakwirira zvinodiwa, kwete chete zvinogona kushandiswa kuzadzikisa zvinodiwa nevatengi. Kune vakakura vagadziri vakatoita hukuru hukuru, maitiro ekuzvinamatira ivo pachavo uye kutungamira kusimudzira kweindasitiri yave kiyi. Sezvo kudiwa kwemusika kuchichinja, izvo zvinodiwa zvechigadzirwa mashandiro uye mashandiro ari kuwedzera kuve nyanzvi uye yepamusoro-magumo.
Iwo akateedzana ezvigadzirwa senge CNC EDM muchina, CNC punching muchina, CNC waya yekucheka muchina, machining nzvimbo uye zvimwe zvigadzirwa zvinotengeswa neDongguan Bica zvinogara zvakamira mumusika nekuda kwekunakira kwavo kwakawanda mabasa uye kudhura kuita. Nhanho inotevera ndeyekugadzirisa iyo indasitiri. Sehuwandu hwesimba (CNC) michina uye michina bhizinesi, Dongguan Guta BiGa Grating Machinery CO., LTD. ichavimba nekambani yakasimba yekutsvaga nekusimudzira kugona uye nehunyanzvi simba rekuwedzera imwe nzvimbo mumusika.
Post nguva: Jul-23-2020
Gantry Surface Kukuya Machine, Gantry Yakapetwa Musoro Wepamusoro Kugaya Machine, Gantry Imwe-Yekupedzisira Surface Kukuya Machine, Gantry Double-End Surface Grinding Machine, Gantry Rudzi rwepamusoro Kugaya Machine, Gantry Imwe Musoro Wepamusoro Pamusoro Kugaya Muchina,